२५ 'विग सट' वाला जुवाडेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पनि मुद्दा ! | Citizen Post News
काठमाडौं । आइतबार विहान रातको २ बजे पक्राउ परेका २५ जना जुवाडेहरुलाई थप दुई मुद्दा लाग्नसक्ने संभावना बढेको छ । पहिलो त, २५ जना जुवाडेहरुबाट बरामद भएको दुई करोड ७० लाख रुपैयाँ वैध वा अवैध प्रष्ट छैन । यदि उक्त बरामद रकम अवैध भएको खण्डमा उनीहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा आकर्षित हुनेछ ।
दोस्रो, २५ जना जुवाडेबाट बरामद भएको करोडौं रुपैयाँको वैधानिक स्रोत के हो ? सम्पत्तिको स्रोत खुलेको छैन भने उक्त मुद्दामा राजश्व ऐन पनि आकर्षित हुनसक्ने छ । यति ठूलो रकम, त्यो पनि जुवा खेल्ने खालबाट नगद बरामद भएको यो नै पहिलो घटना हो । जबकि महानगरीय प्रहरी बृत्त महाराजगञ्जले पक्राउ गरेका 'विग सट' वाला जुवाडेहरुको कनेक्सन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म रहेको छ ।
पक्राउ पर्नेहरुमा काभ्रेली गुण्डादेखि ठेकेदार, दलाल र ब्यवसायीसम्म रहेका छन् । उनीहरुको साथबाट प्रहरीले दुई-चार लाख रुपैयाँ मात्र बरामद गरेको थिएन । जबकी उक्त जुवा अखडाबाट चेकसहित दुई करोड ७० लाख रुपैयाँ, ३२ थान कौडा र ४ बुक ताससमेत बरामद भएको थियो । विक्रम गौतमको घरमा सञ्चालित जुवा अखडाबाट पक्राउ परेका २५ जना जुवाडेमध्ये ६ जनाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्चमा दर्ता गरेर तत्काल छुट्न प्रयास गरेता पनि उक्त प्रयास असफल भएको थियो । उनीहरुलाई भोली अर्थात बुधबार सर्वोच्चमा पुनः उपस्थित गराईदै छ ।
महाराजगञ्ज बृत्तका प्रमुख डिएसपी उमेश लम्सालले उक्त मुद्दालाई विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । उनले बरामद भएको करोडौं रकम र पक्राउ परेका ब्यक्तिहरुमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै जुवा ऐन बाहेक कुन मुद्दा आकर्षित हुन्छ भन्ने बारेमा कानुन विद्हरुसँग पनि छलफल गरिरहेको बताए ।
यि हुन् पक्राउ जुवाडे:
जुवा अखडाबाट पक्राउ प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘बा’ भन्दै सम्वोधन गर्ने बलराम सापकोटा उर्फ ‘बले’, काभ्रेली गुण्डा एवम् नामुद जुवाडे मुक्ति लामा, कुनै बेलाका डान्स बार सञ्चालक प्रदीप बोगटी, काभ्रेली समूहका दावा लामाका खास मान्छे भनेर चिनिएका (रोशन रोशन तामाङ, नवाङ लामा र धावा लामा), बुद्ध लामा, श्रवणकुमार गोयल (बैंकर), पवनकुमार अग्रवाल (ठेकेदार) कृष्ण भण्डारी, राम तामाङ पटके जुवाडे, सिताराम खड्का पटके, अशोक श्रेष्ठ, श्यामप्रसाद पराजुली, रञ्जन राजवंशी र विक्रम गौतम (जुवा अखडा सञ्चालक), रामकृष्ण केसी, इन्द्र श्रेष्ठ, ललितपुरका प्रेम थापामगर (जुवाडे तथा पटके), सोहेल कार्की (घरजग्गा दलाल), सुमन गुरुङ, सोभित सिलवाल (मिटरब्याजी), पवित्रकुमार कार्की (एयर डाइनेस्टीका सञ्चालक), शम्भु बढुाथोकी र शुम्भु शेर्पा रहेका छन् ।